» ‘मेलाले आर्थिक चहलपहल बढाउनेछ ।’
‘मेलाले आर्थिक चहलपहल बढाउनेछ ।’
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटवालसंगको कुराकानी
१८ फाल्गुन २०७५, शनिबार ०१:०६
मेला आयोजक मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटवाल
मकवानपुरको हेटौंडामा राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला हुदैछ । हेटौंडा ५ क्याम्पाडाँडामा यही फागुन १६ गतेबाटै मेला हुने तयारी गरिएपनि मौसम प्रतिकुलताका कारण दुई दिन स्थगित मेला फागुन १८ गतेबाट आयोजना गरिएको हो । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गर्ने मेलामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उत्पादन, सेवाहरुको व्यापार, कृषि प्रदर्शनी, पर्यटन प्रवर्दन , स्वेदेशी जुत्ता प्रदर्शन, हेटौंडा आइडल लगायत आकर्षण रहने जनाइएको छ। मेला आयोजना गर्नुको उदेश्य , मेलाको महत्व लगायतका विषयमा आयोजक मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष कृष्ण कटवालसंग लोकखबरका शिव चौलागाईंले गरेको कुराकानी :
मेलाको आकर्षणका विषयमा जानकारी गराइ दिनुहो्स् न ।
-मेलामा हामीसंग ४ सय ४० वटा स्टल रहने छन् । होटल, कपडा, आइडी, मोबाइल, कृषि, अटो लगायतका स्टल यो मेलामा रहनेछन् । यसका साथै हेलिकोप्टरबाट हेटौंडा आसपास तथा बाहिरी जिल्लामा समेत अवलोकन एवम् दर्शनको प्याकेज व्यवस्था गरिनेछ । हात्ति, घोडा, बोटिङ लगायत आकर्षण यो मेलामा व्यवस्था गरेका छौं । बाल उद्यानमा कृतिम चिडियाघर हुनेछ । यो पटक मौतका कुवा हुनेछैन । प्रदेश ३ का विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले विभिन्न योजनाका विषयमा मेलामा अन्तरक्रिया गर्नुहुनेछ । हरेक दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था पनि यो मेलामा गरिनेछ । मेलामा हामीले अधिकांश स्टल मकवानपुरलाई प्राथमिकता दिएका छौं । देशका विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि मेलामा सहभागिताका लागि हामीले पत्राचार गरेका छौं ।
मेलामा मकवानपुरको पहिचान हुने के देख्न पाइन्छ ?
-हामीले काठको ठेकी राख्ने सोच बनाएका थियौं । तर, सोचेजस्तो व्यवस्था गर्न सकिएन । सबैलाई मकवानपुरको पहिचान भनेको काठको ठेकी हो, व्यवस्था गरौं भनियो तर सकिएन । मकवानपुरमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायको घर मेलामा प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ । उनीहरुको बसाइ, खानपीन, भेषभुषा कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने अवसर होस् भनेर हामीले यस्तो प्रदर्शनमा राखेका हौं । पालुङबाट ल्याइएको अल्लोबाट महिला उद्यमीले तयार पारेको जुत्ता पनि मेलामा हेर्न सकिनेछ । हेटौंडा ५ मा रहेको मत्स्य विकास केन्द्रबाट उत्पादन भइरहेको माछा पनि मेलामा राखिएको छ ।
मेलामा विक्रीका लागि राखिएका उपभोग्य बस्तु, लत्ता कपडा महङ्गो हुने गरेको गुनासो आउँने गरेको छ । स्टल राख्नु भनेको आफ्नो सामग्री, उत्पादनको प्रचार गर्ने हो भन्दा पनि बढी भन्दा बढी मूल्य लिएर नाफा कमाउने भन्नेमा स्टलवालाहरु लागेको देखिन्छ । यसतर्फ तपाईहरुको ध्यान गएको छ की छैन ?
-मेलामा यस्ता गुनासाहरु पक्कै पनि आइरहेका छन् । हामीले राम्रो सोचेर केही काम गर्न खोजिरहेका हुन्छौं, कहिलेकाही सोचेजस्तो नभइ दिन सक्छ । यो मेलामा हामीले निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, कृषिको प्रदर्शनीका लागि निशुल्क स्टल व्यवस्था गरेका छौं । हेटौंडा बजारबाट मेलास्थल सम्म जानका लागि निशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराएका छौं । अटो तथा इरिक्सा अनि टेम्पोमा पनि विशेष छुटमा भाडाको व्यवस्था गरेका छौं । समग्रमा मेलालाई राम्रोसंग सम्पन्न गर्नका लागि हामी लागिपरेका छौं ।
विगतमा तपाई विभिन्न पदमा रहेका बेला मेला सम्पन्न भए । अहिले विगत १४ महिनादेखि तपाईं नेतृत्वमा रहेको संघले मेला आयोजना गरिरहँदा आफ्नो नेतृत्वमा गर्ने मेलामा केही नयाँपन प्रस्तुत गरौं भन्ने चाँही लागेको छैन तपाईंलाई ?
-यस पटक सहित म पाँच वटा मेलामा छु । विगतमा मैले ४ वटा मेला सफलतापूर्वक विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर सम्पन्न गरे । विगतबाट सिकेका आधारमा पनि यो मेलालाई केही राम्रो गरौं भन्ने लागेको छ । यो पटक विगतमा जस्तो गुनासो नआओस् भन्नका लागि होटलको स्टलमा स्पष्ट रुपमा देखिने गरी मेनुको व्यवस्था गर्न लगाएका छौं । मेलामा अवलोकनकर्ताबाट महङ्गो भयो भन्ने खालको गुनासो नआओस् भन्नेमा सचेत छौं । यसका साथै मकवानपुरको हेटौंडा बजारबाट अलि पर रहेका चौरलाई व्यवस्थापन गर्ने अवसर पनि यो मेलाबाट हामीलाई मिलेको छ। भोलिका दिनमा मेलाका लागि नयाँ गन्तव्यका रुपमा चौरको विकास हुने छ ।
मेलामा विगतमा जस्तै हेटौंडा आइडल हुनेछ, अन्य सांस्कृतिक पक्ष चाँही के-के व्यवस्था छ ?
-मेलामा आइडलका अलावा स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारहरुको विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुती प्रदर्शनी हुनेछ । विगतमा हामीले जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा पञ्चेबाजा प्रतियोगिता गर्दै आइरहेका थियौं । अहिले जिससबाट सहयोग प्राप्त हुन नसके पनि त्यो महत्वपूर्ण प्रदर्शन भएकाले हामी यो पटक पनि पञ्चैबाजा प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनछौं । जे होस् हामी मेला अवलोकनका लागि आउँने दर्शकलाई पूर्ण मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछौं ।
यस्ता मेला महोत्सवमा कलाकारलाई नै बढी खर्च हुने गरेको, अवलोकनकर्ता पनि जता भीड त्यतै लाग्ने गरेको, जुन उदेश्यले मेला-महोत्सव सञ्चालन गरिन्छ । ती उदेश्यहरु पूरा नहुने गरेको सुनिन्छ नि ?
-मान्छेको रोजाई फरक फरक हुन्छ । कसैलाई के मन पर्छ कसैलाई के । मेलामा कसैलाई गीत संगीतले आकर्षण गर्छ भने कसैलाई के ले आकर्षण गर्नसक्छ । यो पटक हामीले उत्ताउलो तथा भड्किलो मेला नहोस् भन्नका लागि सचेतता अपनाएका छौं । राष्ट्रिय कलाकार नल्याई पनि भएन । ल्याउँन उहाँहरुको माग बढी नै छ ।
मेलामा कति दर्शकले अवलोकन गर्लान्, कति रकमको कारोबार होला ? के अनुमान गर्नुभएको छ ?
-मेलामा करिब ५ लाख दर्शकले अवलोकन गर्नुहोला भन्ने हाम्रो अनुमान छ । प्रदेश ३ का १३ वटै जिल्लाबाट मेलामा अवलोकन तथा स्टल राख्न मान्छेहरु आउनेछन् भन्ने हाम्रो सोच छ । मेला सम्पन्न गर्नका लागि करिब एक करोड ३० लाख रुपिया लागत लाग्ला । खर्च र आम्दानी उस्तै होला भन्ने लाग्छ । हामीलाई विभिन्न स्पोन्सरबाट प्राप्त हुने रकम चाँही नाफा होला भन्ने सोच गरेका छौं । अहिले नै कारोबार तथा नाफा घाटाको विषयमा यसै भन्न सकिन्न ।
यस्ता मेला-महोत्सव पटक पटक हुदै आएका छन् । खासमा के का लागि गर्ने हो यस्ता कार्यक्रम ? फाइदा चाँही के त ?
-विशेषत : यस्ता मेला–महोत्सवबाट जिल्लामा आर्थिक चहलपहल बढोस् भन्ने नै हो । मकवानपुरको होटल, पर्यटन, खाद्यान्न लगायत व्यवसायमा आर्थिक चहलपहल बढ्छ । मकवानपुरकै उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि फाइदा पुग्न यस्ता मेलाले ।
यो मेलाबाट कति रुपिया नाफा होला त ?
-यो मेलाबाट ३०/४० लाख रुपिया बचत गर्न सकिन्छ की भन्ने सोचमा छौं । अवलोकनकर्ता बढेमा र खर्च घटेमा हामी नाफा गर्न सक्छौं ।
मेला सकिएको लामो समयसम्म पनि मेलाको आयव्यय सार्वजनिक नहुने गरेको चर्चा विगतमा सुनिएको हो । यो मेलाको आयव्यय चाँही कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ नि ?
– हामी यो मेला सकेको एक महिनाभित्र आयव्यय सबै सार्वजनिक गर्नेछौं । मेलाबाट हुने आम्दानी अतिथी सदन निर्माणमा लगाउनेछौं ।
मेलालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि को-को संग समन्वय गर्नुभएको छ ?
– हामी सरोकारवाला सबै पक्षसंग आपसमा समन्वय गरेर मेलामा जुटेका हौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश ३ सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, कृषि कार्यालय, नारायणी संघ, उद्योग संघ, बस्तुगत विभिन्न संघ, प्रहरी,आर्मी, ब्रम्हाकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र, हेटौंडा नगरका विभिन्न विद्यालय लगायत आवश्यक सरोकारवाला, पक्षसंग समन्वय गर्दै हामी मेलालाई भव्य अनि सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौं । आशा छ सबैको साथ सहयोगले मेला सफलतापूवर्क सम्पन्न हुनेछ ।